Bokashi training for gardeners – Bokashi Myanmar
အောက်မှာ မြန်မာလို ပါသေးတယ်နော်။
We run special bokashi composting training programs for garden and household staff. The two-hour program is held in our bokashi yard in North Dagon twiceamonth.
Price per group: 30000 ks per pax, 2-5 people 50,000 ks, 6-10 people 100,000 ks. Languages English and Myanmar as needed.
Please send usamessage on our facebook page or using the contact form here.
Our training workshops are on hold at the moment, but we’ll let you know when they restart.
Bokashi composting for gardeners
Time: Tuesday 10am – noon or Tuesday 3pm – 5pm (or as agreed)
Contact person: Inda Aung Soe
Clothing: Please bring practical work clothes
30000 ks per pax
Price per group: 2-5 people 50,000 ks, 6-10 people 100,000 ks
In this workshop we will show you how to collect and ferment your kitchen food waste using the bokashi method.
We will also show you how to startabokashi compost stack in your garden so you can process green garden waste along with food waste from your household or small restaurant – as well as dry leaves from your garden. The result: rich, living soil!
create your own organic compost using materials that would otherwise go to waste
make your garden more fertile and your plants healthier and more pest-resistant
increase the nutrient-level of the fruit and vegetables you grow
compost large volumes of dry leaves efficiently and easily
eliminate the need for burning dry leaves
reduce greenhouse gas emissions from rotting and burning of organic waste and instead create much-needed soil carbon
BOKASHI WORKSHOP SESSION,2hours
The workshop will be held in our bokashi compost yard in North Dagon. We will show you how large-scale bokashi composting works in practice, and encourage you to get involved so you can learn how it is done.
Note that we may do part of the training indoors depending on weather conditions.
Bokashi bran, EM-1/molasses, CEM and ready bokashi compost are available for purchase. We can also help you with supplier recommendations for barrels, bamboo, pallets, seeds and other materials you may need.
collecting and fermenting food waste from your household or small restaurant using bokashi
the bokashi composting process, how it works and what to look for
collecting and shredding green garden waste for use in your compost
collecting and storing dry carbon-based material such as brown leaves
designing and constructingapractical compost stack in your garden
making CEM (Concentrated Effective Microorganisms) from EM-1 and molasses
harvesting your compost and preparing for use in the garden
using food-waste bokashi directly in your kitchen garden
using food-waste bokashi directly in your planting containers and urns
using food-waste bokashi directly to prepare soil for planting trees and bushes
သင်တန်းကိုတော့ မြောက်ဒဂုံမှာရှိတဲ့ ဘိုကာရှီခြံမှာ ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းမှာ ဘိုကာရှီမြေဆွေးပုံ ပြုလုပ်နည်းကိုပြသပေးပြီး၊ မျက်တွေ့လက်တွေ့ ထိတွေ့သင်ယူခွင့်အတွက် မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် သင့်လျော်တဲ့ အဝတ်အစားလေးတွေ ဝတ်ဆင်လာကြဖို့ (သို့) အပိုတစ်စုံယူလာကြဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
ရာသီဥတုအခြေနေပေါ် မူတည်ပြီး သင်ခန်းစာတစ်ချို့ကိုတော့ အိမ်ထဲမှာပဲ ပြသပေးတာမျိုးလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
အီးအမ်ဘိုကာရှီဖွဲနု၊ အော်ရီဂျင်နယ်အီးအမ်၊ တင်လဲရည်၊ အီးအမ်အပြင်းနဲ့ အသင့်သုံး ဘိုကာရှီမြေဆွေးစတာတွေလည်း ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေလိုအပ်သော ပုံးများ၊ ဘူးများ၊ ပဲလတ်ပြား၊ ဝါး နှင့် မျိုးစေ့ စသည်များ ရနိုင်တဲ့ နေရာတွေကိုလည်း ညွှန်းပေးနိုင်ပါသေးတယ်။
ဘိုကာရှီမြေဆွေးလုပ်ငန်းစဉ်၊ လုပ်ဆောင်ပုံနှင့် ကြိုတင်မျှော်လင့်ထားအပ်သည်များ၊
အီးအမ် နှင့် ဘိုကာရှီ မိတ်ဆက်၊
မိမိအိမ်၊ စားသောက်ဆိုင်စသည်မှ စားကြွင်းများကိုစု၍ ဘိုကာရှီဖြင့် အချဉ်ဖောက်ခြင်း၊
မြေဆွေးပုံတွင်ထည့်သွင်းအသုံးပြုရန် ဥယျာဉ်ခြံထွက် အမှိုက်အစိမ်းများစုဆောင်းခြင်းနှင့် ဖြတ်ခြင်း ပိုင်းခြင်း၊
ပန်းအိုးစသည်မှာ Food waste ဘိုကာရှီအား အသုံးပြုခြင်း၊
Food waste ဘိုကာရှီသုံးပြီး သစ်ပင် စားပင်အကြီးများ စိုက်ပျိုးရန် မြေပြင်ခြင်း၊
ဘိုကာရှီမြေဆွေးဖြင့် ပျိုးပင်ပေါက်များ၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ အသီးအနှံပင်များ စိုက်ပျိုးခြင်း
-အမှိုက်အဖြစ်စွန့်ပစ်နေရတာတွေကို အသုံးချပြီး မိမိကိုယ်တိုင် သဘာဝဩဂဲနစ် မြေဆွေးကောင်းပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊
-သင့်ခြံ စိုက်ခင်း စတာမှာ မြေအရည်အသွေး ပိုကြွယ်ဝအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး၊ သင့်စိုက်ခင်း အပင်လေးတွေကို ပိုးမွှားဒဏ်ခံနိုင်ပိုရှိပြီး ကျန်းမာသန်စွမ်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊
-သင်စိုက်ပျိုးတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် အသီးအနှံများ၏ အာဟာရတန်ဖိုးကို မြင့်တင်ပေးနိုင်ခြင်း၊
-မီးဖိုထွက်စားကြွင်းအမှိုက်များကို အမှိုက်ပုံသို့ ဆက်လက်စွန့်ပစ်စရာမလိုအပ်တော့ခြင်း၊
-သစ်ရွက်ခြောက်အမြောက်အများကိုလည်း တပါထဲ လွယ်ကူ ထိရောက်စွာ မြေဆွေးပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊
-သဘာဝအမှိုက်များ ပုပ်သိုးဆွေးမြေ့ခြင်းနှင့် မီးရှို့ခြင်းမှထွက်ရှိသော ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကို လျော့ချနိုင်ပြီး၊ ဒီအစား ပိုမိုလိုအပ်နေတဲ့ မြေဆီလွှာကာဗ်န်ဖန်တီးထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ခြင်း၊
-ပိုမိုပြီး ရေရှည်တည်တ့ံမှုရှိတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးမှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အားဖြည့်ပေးနိုင်ခြင်း…
စတဲ့ စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ရရှိလာမှပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မီးဖိုချောင်ထွက်အမှိုက်များကို စုဆောင်းရယူပြီး ဘိုကာရှီနည်းသုံးကာ အချဉ်ဖောက်နည်း၊
အချဉ်ဖောက်ထားတဲ့ Kitchen wastes bokashi အပါအဝင်၊ ဥယျဉ်ခြံထွက်အမှိုက်များ၊ သစ်ရွက်ခြောက်စသည်များ အသုံးပြု၍ ဘိုကာရှီမြေဆွေးကန်များ တည်ဆောက်ပြုလုပ်နည်း၊
မြေဆွေးပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်မယ့် အဓိကရလာဒ်ကတော့ ဩဇာ အာဟာရကြွယ်ဝပြီး ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ မြေဆွေးရရှိနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။